काठमाडौंबाहिर तारे होटेल खोल्दै हुनुहुन्छ ? सरकारले बनायो खुकुलो मापदण्ड - Naya Patrika
काठमाडौंबाहिर तारे होटेल खोल्दै हुनुहुन्छ ? सरकारले बनायो खुकुलो मापदण्ड
नेपाल सरकारले दुर्गम भेगमा खुल्ने
एकतारेदेखि पाँचतारे होटेल/रिसोर्टका लागि मापदण्ड खुकुलो बनाएको छ । एकतारेदेखि पाँचतारे होटेल/रिसोर्टसम्बन्धी ४ कात्तिक २०७० मा राजपत्रमा प्रकाशित आदेशमा संशोधन गर्दै सरकारले नयाँ मापदण्ड तोकेको हो । सो आदेशमा सुगम र दुर्गममा खुल्ने सबै होटेलका लागि समान प्रकृतिको मापदण्ड तोकिएको थियो ।
संशोधित मापदण्डअनुसार अब कतिपय सन्दर्भमा दुर्गम तथा हिमाली भेगमा खुल्ने तारे होटेलले सहरी इलाकामा खुल्ने होटेल/रिसोर्टसरह मापदण्ड नपुर्‍याए पनि तारे होटेलको मान्यता पाउनेछन् । व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि असमान प्रकृतिको मापदण्ड परिवर्तनको माग गर्दै आएका थिए । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २६ मंसिर २०७४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै मापदण्डको संशोधन सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले एकतारेदेखि पाँचतारे होटेलसम्मको मापदण्डमा मात्र संशोधन गरेको छ । पर्यटकीय होटेल, रिसोर्ट तथा पाँचतारे डिलक्स होटेलको हकमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । सरकारी मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालनमा रहेका कम्तीमा २ सयवटा सुत्ने कोठा भएका होटेल/रिसोर्टलाई ‘पाँचतारे डिलक्स’भित्र वर्गीकरण गरिएको छ । होटेल/रिसोर्टलाई सरकारले सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वर्गीकरण गरेको हुन्छ । ती विविध मापदण्डमध्ये कोठा र केही भौतिक सुविधासम्बन्धी मापदण्ड मात्र संशोधन गरिएको छ ।
के–के परिवर्तन भयो ?
पुरानो : एकतारे होटेलमा कम्तीमा ५ वटा गाडी पार्किङ गर्न सकिने उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्ने
नयाँ (थप) : तर, गाडी नपुगेको स्थानमा होटेल खोल्दा पार्किङ अनिवार्य छैन
पुरानो : कम्तीमा २० वटा सुत्ने कोठा हुनुपर्ने
नयाँ : काठमाडौं उपत्यकामा रहने होटेलको हकमा कम्तीमा २० वटा र उपत्यकाबाहिर रहने होटेलको हकमा कम्तीमा १५ वटा सुत्ने कोठा हुनुपर्ने
पुरानो : कम्तीमा १० वटा गाडी पार्किङ गर्न सकिने उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्ने
नयाँ (थप) : तर, गाडी नपुगेको स्थानमा सञ्चालन हुने होटेलको हकमा पार्किङ अनिवार्य हुनेछैन
पुरानो : कम्तीमा ४० वटा सुत्ने कोठा हुनुपर्नेछ
नयाँ : काठमाडौं उपत्यकाको हकमा कम्तीमा ४० वटा र उपत्यकाबाहिर रहने होटेलको हकमा ३० वटा सुत्ने कोठा हुनुपर्ने
पुरानो : कम्तीमा २० वटा गाडी पार्किङ गर्न सकिने उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्ने
नयाँ (थप) : तर, गाडी नपुगेको स्थानमा सञ्चालन हुने होटेलको हकमा पार्किङ व्यवस्था अनिवार्य हुनेछैन
पुरानो : कम्तीमा ६० वटा सुत्ने कोठा हुनुपर्ने
नयाँ : काठमाडौं उपत्यकाको हकमा कम्तीमा ६० वटा र उपत्यकाबाहिर रहने होटेलको हकमा कम्तीमा ४५ वटा सुत्ने कोठा हुनुपर्ने
पुरानो : औसत क्षमताको बाहिरी पौडी पोखरी हुनपर्ने
नयाँ (थप) : तर, उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्थापना हुने होटेलको हकमा पौडी पोखरी अनिवार्य हुनेछैन
पुरानो : कम्तीमा ८० वटा सुत्ने कोठा हुनुपर्नेछ
नयाँ : काठमाडौं उपत्यकामा रहने होटेलको हकमा कम्तीमा ८० वटा र उपत्यकाबाहिर रहने होटेलको हकमा कम्तीमा ६० वटा सुत्ने कोठा हुनुपर्ने
पुरानो : एक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोडी पोखरी र बाल पौडी पोखरी छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने र पोखरी र सनबाथ क्षेत्र रुख–बिरुवाले घेरिएको तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट नदेखिने हुनुपर्ने
पुरानो : कम्तीमा १०० वटा सुत्ने कोठा हुनुपर्ने
नयाँ : काठमाडौं उपत्यकामा रहने होटेलको हकमा कम्तीमा १०० वटा र उपत्यकाबाहिर रहने होटेलको हकमा कम्तीमा ८० वटा सुत्ने कोठा हुनुपर्ने ।
कोठा होइन, सेवामा प्राथमिकता दिनुपर्छ
यो संशोधनले व्यवसायीको मागलाई भने सम्बोधन गर्न सकेको छैन । हामी कोठाको संख्यामा होइन, सेवामा प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्षमा छौँ । लुक्ला, नाम्चे या अन्नपूर्ण बेसक्याम्पजस्ता क्षेत्रमा ठूलो क्षमताका होटेलभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा दिने सानो क्षमताका होटेल बढी चल्छन् । व्यवसायीलाई पर्यटक जति पुग्छन्, सोही आधारमा होटेलको क्षमता निर्धारण गर्ने अधिकार हुनुपर्छ । होटेललाई कोठा संख्याका आधारमा वर्गीकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड होला । तर, नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले त्यो सम्भव हुन्न । त्यसकारण, थोरै कोठा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तरअनुसार सेवा दिन्छ भने त्यो होटेलले स्तरअनुसारको तारे मान्यता पाउनुपर्छ ।
विनायक शाह, महासचिव
सामसुङ ग्यालेक्सीको नयाँ जे–सिक्स स्मार्टफोन बजारमा
मेगा बैंकमा नयाँ सञ्चालक समिति, अध्यक्षमा भोजबहादुर शाह चयन